Ny vidin-javatra dia mety miova miankina amin'ny tolotra sy ny tsena antony. Dia handefa anareo nohavaozina vidiny lisitra araka ny orinasa fifandraisana anay Raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, isika iraisam-pirenena rehetra mitaky baiko mba manana mitohy mba ambany indrindra dia be. Raha mitady ny mivarotra fa amin'ny kely be dia be, dia manoro hevitra ianao jereo ny tranonkala
Eny, tena afaka manome tahirin-kevitra ao anatin'izany ny Porofo fa Analysis / Conformance; Insurance; Origin, sy ny antontan-taratasy fanondranana izay ilaina.
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha toa hitarika ny fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Isika fiantohana ny fitaovana sy ny hafa. Ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po amin 'ny vokatra. Ao amin'ny fiantohana na tsia, dia ny kolontsaina izay namanay ny adiresy sy ny hamaha ny olana rehetra mpanjifa ny fahafaham-po ho an'ny rehetra
Ny nandefa vola Miankina amin'ny fomba misafidy ny mahazo ny entana. Express no tokony haingana indrindra fa koa fomba lafo indrindra. Ny seafreight no vahaolana tsara indrindra ho an'ny be dia be. Izay indrindra ny tahan'ny entana azontsika ihany no manome anareo, raha fantatsika ny tsipiriany ny vola, lanja sy ny fomba. Mba andefaso olona izahay Raha mila fanazavana fanampiny.